Jago Banaan - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
29.04.2011 | Qeybta Guud
Kuxigeenka Maamulaha Saadka ee Somalia
Kusugan Nairobi (50%) (50%) u safraya Soomaaliya
Dakhaatirta aan xuduuda lahayan(MSF) Spain waa hey´ad caalami ah oo kashaqeyso Soomaaliya.
Waxaan Shaqa gelinaynaa kuxigenka maamulaha saadka ka mid ah shaqalaha caasimada kusugan Nairobi, oo mar walba u aadayo Somalia shaqo kusabsan Saadka iyo tawabarida shaqalaha ee kusugan Muqdisho, Balcad iyo Jowhar.
Shaqada uu qaban doono; lakin kuma´eko intaan kaliya:
Mas´ul ka ah maamul nidham leh ee waafaqsan MSF Spain Soomaaliya.
Diyaar u ah in uu si joogta safar ugu tagaayo Soomaaliya.
Wuxuu si khaas isha ugu hayn doona islamarkaasna talo ka bixin ku samayn doona sida dhamaan qeybinta dalabaadyada o dhan, bakhaaraynta, gacan ku haynta iyo maamulka badeecadaha, isgarsiinta, la socodka korontada goobaha, qalbayada kala duwan iyo dayactirkooda, la socod dhaqdhaqyada kala duwan e badeecadaha iyo qalabyada(bixinta iyo soo galintooda), Gaadiidka, maamulista raasumaalka, nadaafada iyo biyaha, iyo sidookale dhismaha.
Mas´ul ka ah lasocdka nadaafaada iyo biyaha goobaha shaqada marka loo baahdo.
Wuxuu talo bixin kasiin iskuduwaha saadka arrimaha la xiriira amniga.
Wuxuu si toos gacan toos ah xaga saadka(logistikada) ka siin doona mashaariicda kala duwan isagoo ka amar qaadanaayo iskuduwa saadka.
Wuxuu caawimaad xaga saadka kasiin doona howlgalada deg dega iyo qiimeynta intaba, iyadoo mararka qaarkood looga bahan doono inuu safro qeybna uga qaato howlgalada salada deg dega.
Caawinkaro aasaasida mashaaricda xirfadaha u leh buuxista nafaasyada saadka ka soo baxa adoo tala lawadaagayo sácala kale ee sadka.
Daboolid shaqalaha kale ee qeybinta iyo farsamo yiqanka ee saaka ee caasimada.
Waxaa loo baahanyay:
Xirfad sare oo heer degree ama Diplooma xaga saadka .
Uugayaraan hal sano oo khibrad kusabsan saadka o u kala soo shaqeeyay hay´adaha kale.
Khibrad shaqo u kala soo shaqeeyey MSF wa tixgelin.
Aqoon sare ku aadan isticmaalka qeybaha kala duwan ee microsftka sida word, excel, PowerPoint iyo wixi la mid ah.
Aqoon iyo khibrad u leh maamulka keydinta talaalka
Khibrad u leh bixinta/qeybinta badeecadaha
Khibrad kusabsan dhismaha.
Faseex u yaqaan qorista iyo hadalka ee luuqada ingiriiska iyo af somaali.
Luuqada Sawaxiliga waa loo tixgalin.
Tayada qofka loo baahanyahay
Xirfad u leeh habaynta iyo isku dubarida.
Qof dadka la shaqayn karo oo na leh madaxnimo xoogan.
Aqoon aad u wanaagsan u leh xaga xiriirinta, kuhadalka iyo qorista oo loo isticmaalaayo combutarka
Hadaad haysato waxa aqoonta oo loobahan yahay, aqonta xirfeed iyo waxbarasho, shahaadooyinkaaga, wixii waraaq kale oo kasocota looshaqeye hore, ludir: MSF-Spain Somalia Admin Department- Nairobi, email address: msferecruitment@gmail.com . Fadlan ku qor jagada lamber 1112 subjat laynka ee emailka.
Codsiga waxaa lasoodiri karaa hadda iyo inta kadaxeyso taarikhda marka ay tahay shan iyo toban bisha mei 2011. kadibna, Dadka damacsan waxaa loosheega in ay u´imaadaan ntafiyur iyo intixaan. Dadka lasooxusho waa lasoo wacaya.
MSF-E waa loo shaqeyo bixiya fursad siman.